विपक्षीको कारण लिम्बू तामाङको जनजातिको मान्यतासमेत खारेज हुनसक्छः मुख्यमन्त्री चामलिङ - खबरम्यागजिन
Homeखबरविपक्षीको कारण लिम्बू तामाङको जनजातिको मान्यतासमेत खारेज हुनसक्छः मुख्यमन्त्री चामलिङ
February 28, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर, सिक्किम 0
जोरथाङ,28 फरवरीः राज्यका विपक्षी पार्टीहरूले लिम्बू-तामाङ सीट आरक्षण हुन नदिएको अनि भविष्यमा विपक्षीकै कारण ‘जनजाति’-को मान्यतासमेत खारेज हुनसक्ने मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आशङ्का जताएका छन्। जोरथाङमा बुधवार आयोजित एसडीएफ पार्टीको राज्यस्तरीय जनसभालाई सम्बोधन गर्दै बुधबार मुख्यमन्त्री चामलिङले विपक्षी पार्टीहरूप्रति यसप्रकारको गम्भीर आरोप र आशङ्का प्रकट गरेका हुन्।
“लिम्बू-तामाङ सीट आरक्षणको फाइल अघि बढ़ेर क्याबिनेटमा जानैलागेको थियो। तर, सिक्किमबाट विपक्षी पार्टीहरूले बारम्बार दिल्ली गएर जनजातिलाई सीट दिनुहुँदैन भनेर त्यसलाई रोके। यहाँबाट बारम्बार दिल्लीमा पोल हालेको छ। एसकेएम पार्टी र भाइचुङलाई कसले खेलाउँदैछ? केन्द्रिय पार्टीहरूलाई कसले सल्लाह दिँदैछ? यहाँ बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूविरुद्ध डरलाग्दो षड़यन्त्र हुँदैछ”,मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए। मुख्यमन्त्रीले चामलिङले भने,“पहिला पनि लिम्बू-तामाङलाई जनजाति हुन नदिन षड़यन्त्र भएको थियो। हामीले उनीहरूलाई जनजाति दिलायौं। अहिले उनीहरूको सीट हुन नदिन अनेक षड़यन्त्र हुँदैछ। माझीलाई केन्द्र सरकारले अनुसूचित जातिबाट हटाएजस्तै लिम्बू-तामाङलाई पनि हटाउने षड़यन्त्र त भइरहेको छैन? जनता होशियार हुनुपर्छ।” विपक्षी पार्टीहरूले लिम्बू-तामाङ सीट आरक्षणको फर्मुला नदिएको तर 32 बाटै सीट दिनुपर्छ भनेर बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको विरुद्धमा गएको चामलिङले बताए। “हामीले दिल्लीमा जनजातिको कुरा गर्‍यौं भने यताबाट ‘नेपालबाट आएको’ भनेर दिल्लीमा ज्ञापन दिन्छ। नेपालको कीर्ते नागरिकता बनाएर मेरो विरुद्धमा समेत न्यायालयमा मुद्दा हाल्यो। 32 बाट कसलाई कति-कति सीट दिनु भनेर एसकेेएस, हाम्रो सिक्किम पार्टी, कङ्ग्रेस, भाजपा सबैले भन्नुपर्छ। तर उनीहरू भन्दैन। राज्यका विपक्षीलाई चलाउने शक्तिले डरलाग्दो खेल खेल्दैछ”,मुख्यमन्त्रीले भने,“अहिले एसकेएमले न्यायालयमा मुद्दा हालेर यो मुद्दालाई अझ पछि पारिदिएको छ। न्यायालयमा मुद्दा परेपछि अब यो प्रधानमन्त्रीले पनि दिन्छु भनेर हुँदैन। न्यायालयमा फैसला आउन कति वर्ष लाग्नसक्छ, थाहा छैन। एसडीएफ पार्टीले मात्र सही, स्पष्ट र न्यायासङ्गत फर्मुला दिएको छ। केन्द्रले यसलाई मानेको पनि छ। तर, विपक्षीहरूले अब चुनाउअघि फर्मुला जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ।” एसकेएमले बन्द डाकेको सन्दर्भमा पनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखे। सिक्किम उच्च न्यायालयले बन्द र हड़ताललाई जनताविरोधी बताएको अनि सरकारलाई कानूनको पूरा पालना गर्न निर्देश दिएको मुख्यमन्त्रीले जिकिर गरे। एसडीएफ पार्टीले पनि अब 500-600 गाड़ीको र्‍याली नगर्ने चामलिङले घोषणा गरे। “हामी राजनीतिक आतङ्कवाद फैलाउने पार्टी होइन। सिक्किममा कसले गाड़ी जलाउँदैछ? अहिले सिक्किमको इतिहासमा गाड़ी जलाउने, रूख ढाल्ने नेता को छ? विपक्षीले जाति र धर्मलाई राजनीति गरेर सिक्किमलाई अशान्त पार्न खोज्दैछ”,चामलिङले आरोप लगाए। हेभेनली पथ अर्गनाइजेशन (एचपीओ)-लाई अहिले एसडीएफविरोधी बनाउने षड़यन्त्र भइरहेको पनि उनले आरोप लगाए। उल्लेखनीय छ, धर्मगुरु गड एन्जेललाई सिक्किम प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै एचपीओका अनुयायीहरू अहिले गान्तोकस्थित जिल्लापाल कार्यालयअघि धरनामा बसेका छन्। “गुरु हजुरलाई मैले आफ्नै घरमा तीनपटक भेट गरेको छु। उनले खेचीपेरीमा पूजा गर्दा पोखरी अपवित्र भयो भनेर सिब्ल्याकले उनीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा हालेपछि उनी सिक्किम नआएका हुन्। हामीले सिक्किम आउन रोकेको छैन। भाइचुङले अहिले उनीहरूलाई सरकारविरुद्ध उचाल्दैछन्”,मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए।
एसडीएफ पार्टीले सिक्किममा इतिहास बनाएको बताउँदै सिक्किमको विकासको इतिहासलाई कसैले तोड्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीले ठोकुवा गरे। आगामी7मार्चअघि चुनाउको घोषणा भएर आचार संहिता लागू हुनसक्ने अनि सिक्किममा 15 अप्रेलदेखि उता कुनै पनि दिन चुनाउ हुनसक्ने सम्भावनाको आकलन गर्दै आगामी दुई महिना दिलोज्यान लगाएर चुनाउमा खट्न एसडीएफ अध्यक्षले पार्टी समर्थकहरूलाई आह्वान गरे। उनले पार्टी क्याडरहरूलाई उम्मेदवार नबोकी पार्टीको स्वार्थमा समर्पित भएर जनताबीच जान आह्वान जनाए। पार्टी समर्थकहरू सुविधाभोगी नभएर जनसेवक हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई स्थानीय व्यापारी तथा पार्टीका विभिन्न निकायहरूबाट संवर्धना पनि जनाइएको थियो। यसअघि, आफ्नो स्वागत वक्तव्य राख्दै मन्त्री जीएम गुरुङले विपक्षी नेताहरूलाई ‘मलबाँस’-को संज्ञा दिए। “मलबाँस मृत्युपछि मान्छेको लाश बोक्न मात्र काम आउँछ। त्यो बाँस फर्किएर पनि आउँदैन”,विपक्षीहरूको सरकारमा आगमन भए सिक्किममा राम्रो राजनीतिको अवसान हुने व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने। यस अवसरमा राज्यका वरिष्ठ मन्त्रीगण, विधायकगण, एसडीएफ पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्व, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि तथा दक्षिण र पश्चिम जिल्लाका जनताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा अन्य पार्टी छोड़ेर एसडीएफमा सामेल हुने राज्यका वरिष्ठ नेताहरूको पनि उपस्थिति थियोे।